၂၀၂၀ရဲ့နွေရာသီနဲ့လိုက်ဖက်မယ့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများ - Chelmo News Portal
လာမယ့်နွေရာသီမှာ ဘယ်လိုFashionမျိုးဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတာ ပျိုမေတို့ခေါင်းမစားရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်တော့မှရိုးမသွားတဲ့ အစင်းဒီဇိုင်းတွေက အခု ၂၀၂၀ မှာလည်း တဖန်ပြန်လည် ခေတ်စားလာပြန်ပြီနော်။ အစင်းဂါဝန်ဒီဇိုင်းတွေဟာဆိုရင် ကမ်းခြေသွားရင် ကြိုးသိုင်းဖိနပ်အပါးလေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားရင် sneaker ဖိနပ်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းလို့အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်။
ပူအိုက်တဲ့ နွေရာသီနဲ့ ဒီလို ဘောင်းဘီတိုအပွ ဒီဇိုင်းက အရမ်းကို လိုက်ဖက်ညီနေတော့မှာနော်။ အပေါ်က တီရှပ်အပွကြီးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အထာလည်းကျပြီး မိုက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးအရမ်းဆန်တာ မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီဖက်ရှင်က ကွက်တိပဲနော်။
လူအများကြားထဲမှာ မိန်းကလေးဆန်ဆန်နဲ့ ထင်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအင်္ကျီလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းက ကွက်တိပဲနော်။ စကပ်အတိုလေးကို ဖိနပ်အပါးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီအရှည်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် တွဲဖက်ဝတ်မလား ? ဂါဝန်အရှည်ပဲဝတ်မလား ? လူအများအားလုံးကြားမှာ ချစ်စရာကောင်းနေမယ့် ဖက်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄) Leather ဖက်ရှင်
Leather ဖက်ရှင်ကတော့ ဥတုသုံးပါးမရွေး လိုက်ဖက်ညီပြီး လုံးဝရိုးမသွားတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ leather စကပ်တွေ၊ ဘောင်းဘီတွေက အရမ်းကို လူကြိုက်များလာပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေး ဝတ်ဆင်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ leather နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အဝတ်အစား တထည်တော့ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။
(၅) တစ်ချောင်းထိုး ဇာဂါဝန် ဖက်ရှင်
တစ်ချောင်းထိုး ဇာဂါဝန် လေးတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး နွေရာသီနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တဲ့ ဒီဇိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လိုက်မယ် ဆိုရင် အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အသွင်အပြင်ကို ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ပျိုမေတို့ရေ… မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် နွေရာသီမှာ လှသထက်လှအောင် အပေါ်မှာပြောထားခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ နွေရာသီကြီးကို ကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်နော်။